Malunga nathi -Zhejiang Isikhokelo soMbane seMoto Co, Ltd.
Ukungabikho kokholo kumashishini kufana nokungabikho kokholo ebantwini. Kunzima uku ukufezekisa injongo enkulu kunye nokuphumelela okuzinzileyo. Nokuba lushishino Isicwangciso okanye uhlengahlengiso lombutho, phantse zonke iinguqu zixhomekeke kokufanayo, inkolelo ecacileyo nenkqubo yenkcubeko. Ngapha koko, ukusekwa okanye ukutshintsha kweenkolelo zomdibaniso iqalwe ngoosomashishini ngokusekwe kwiimfuno zotshintsho lwesicwangciso kwaye iyasebenza
Apha, unokubona ukukhula kwethu kokusebenza kwaye ufunde malunga nophuhliso lwethu lwamva nje. Sikulungele kakhulu nawe ukwabelana nawe ngamava amnandi okukhula sikunye namaqabane ethu kwihlabathi liphela. Ewe uyalubona uxanduva lwethu noxanduva. Ekusukeleni amashishini kunye nabasebenzi ukuba bakhule kunye ngaxeshanye, sihlala sibambelela kwindlela yophuhliso oluzinzileyo kwaye sithatha inxaxheba kwezentlalo uxanduva, Inzondelelo yentlalontle yoluntu, ukubuya kwezentlalo.
Apha, unokubona umbono wethu. Silandela ngokungagungqiyo "ezimbini zemali, ezintathu ezintsha, ezintlanu, tillion "Iinjongo zesicwangciso-qhinga, hayi kuphela ukuzama ukuzuza inguqu eqhubekayo kunye nokuphuculwa koqoqosho lwase China phantsi kwesiqhelo, kodwa nokwabelana ngamathuba kunye noogxa babo behlabathi, Phuhlisa kunye.
Ixabiso livela ekudaleni! Siyakumema ukuba wenze ikamva kunye!
Gxila kuphuhliso lwempompo ekhuselekileyo kunye nokusingqongileyo kunye nenkqubo kunye nokwenza ixabiso kubo bonke abathathi-nxaxheba.
Nyusa umfanekiso wempompo yaseTshayina kunye nenkqubo yoshishino, ukuba yinkampani ekhokelela kuphuhliso oluzinzileyo kolu shishino.
Ixabiso leNkokeli yokuKhokela
Qhuba ishishini nge-VIRTUE, Landela impumelelo nge-PERFECTION, Phumelela u-EFFICIENCY, Yiya nge-ACTION ezifanelekileyo.
Imifanekiso yengonyama enomlingiswa wentshiseko, isisa, ithemba kunye nokuzimisela kuyenziwa njengemascot esekwe kwisalathiso se-Leadrive ye-zodiac.
Zhejiang Isikhokelo soMbane seMoto Co, Ltd. Ifunyanwa eTaizhou-indawo yokuzalwa enamandla Isixeko soqoqosho lwabucala kwiphondo laseZhejiang, kunye nokuxhomekeka kuqoqosho olukhulu Isangqa seYangtze River Delta, iZhejiang Leadrive Electric Motor Co, Ltd. (emva koku ebizwa ngokuba "yimoto emithathu") inommandla ophakamileyo wejografi. kwisikhululo senqwelomoya saseHuangyan ukuba ziikhilomitha ezi-2 kuphela kude kwaye izibuko laseHaimen ziikhilomitha ezili-10 kude, yinkampani Yonwabela indawo efanelekileyo yamanzi-yomoya-yokuhambisa ngolawulo lwayo Iqela, inkqubo yolawulo lwala maxesha, abasebenzi abakumgangatho ophezulu, imveliso egqibeleleyo izixhobo, izixhobo zovavanyo olupheleleyo, amandla ezobugcisa anamandla, imveliso ethembekileyo umgangatho, inkqubo yokuvelisa ngokugqibeleleyo, inkqubo esemgangathweni egqibeleleyo, i-R & D ephambili umthamo kunye neqela elithengisayo lobuchule, i-Leadrive MOTOR iye yaba yinkwenkwezi ekhulayo e China motor mveliso. Inethiwekhi yokuthengisa isasazeke kwamanye amaphondo angama-20 nezixeko kwilizwe liphela. Uhlobo lwayo lophawu luchukumisile kuye wonke umntu iye yaba lukhetho olukhethiweyo lwe-cusomers kwaye iphumelele igama elihle phakathi kwabasebenzisi.
Imoto ekhokelayo ikhethekileyo ekwenziweni, kuphando kunye nasekuthengisweni kweentlobo ezahlukeneyo Iimoto. Iimveliso zayo zibandakanya uthotho lwee-3-ph asynchronous motors ezifana Y, YE2, YE3, YD, YEJ, YVP kunye nezinye iimoto ezizodwa. Ukwamkela iisandard zesizwe ezifanayo kunye namaxabiso ombane kunye nokunyuka kokuma kwii-standrds ze-IEC, iimveliso zayo zinayo izibonelelo kubandakanya ukusebenza ngokukuko, ukuqala kwetorque ephezulu, inqanaba lesandi esiphantsi ukungcangcazela okuphantsi, kunye nokuthembeka okuphezulu. Iimveliso ziye zavavanywa ukuthobela uhambelwano lwe-CE kwi-EU amazwe kwaye iCCC kunye neCQC ziqinisekisiwe. Inkampani iphumelele i-IS09001 yokuhlangana ukuthobela inkqubo esemgangathweni. Imoto ekhokelayo iyazibophelela kwizisombululo ezilungiselelwe i abasebenzisi ekusetyenzisweni kwemizi-mveliso kunye nombane ngokulungiswa kweempawu ezizodwa iinjini.
Ubuchule kunye nokunyaniseka ngumgaqo wethu. Ukuziqhelanisa nohlengahlengiso kunye nokuguquguquka lilungelo lethu. Sijonge ukumela i-Made in China kwicandelo leemoto zombane kwihlabathi liphela. Bambelela kumbono "wokuphatha abathengi ngentembeko kunye nokuphumelela kwimarike ngomgangatho" kunye nokuhlangabezana neemfuno ezihlala ziguquka zabathengi ekhaya nase-aborad, thina bazinikele ekudaleni uphawu lwe "motor lead" kwaye bayazise nase China ngokunjalo ehlabathini. Ngokunyaniseka kwethu kunye nobukrelekrele, sijonge phambili kwikamva eliqaqambileyo kunye nawe.